Qulqullina Barnootaa Afaan Ingilizii Oromiyaa Keessaa - OPride.com
Jawaar Siraaj Muhammadiin
Marii dhiheenya kana godhamte takkarraa akkaan hubadhetti sadarkaan qulqullina barnoota Afaan Ingiliizii kan naannoo Oromiyaa keessatti barsiifamu daranuu hammaachaa dhufuun waan nama yaachisu tahuu isaati.
Komiilee kanneen keessaa ijoon:
1. Sirna duraanii jalatti barnoonni waliigalaa kutaa tokkoo hanga jaheessootti Afaan Amaaratin baratamee, torbarraa hanga barnoota sadarkaa ol’aanatti ammoo Afaan Ingliziitin itti fufa. Sirna ammaa kana jalatti ammoo, kutaa duraatii haga saddeetitti Afaan Oromootin, san booda Afaan Ingliziitin itti fufa. Kun ammoo, hiree ijoolleen kutaa torbaafi saddeet itti Afaan Ingliziitin barattee beekkoomsa afaan sanii jabeeffachuuf qabdu waan hanqiseef isaan miidhee jira,
2. Noonnolee birootti ammas kutaa torbaffaarraa eegalee Afaan Ingliziitin baratan. Qormaata xumura sadarkaa lammataa ammoo, bifa tokkoon biyti guutuun waan fudhattuf, ijoolleen Oromiyaa garanaan miidhamaa jirti.
3. Erga barnoonni Afaan Oromootin kennamuu eegalee as ijoolleen Oromoo Afaan Amaaraa wan hin beeyneef hiree hojii federaalaa argachuu dhabaati jirti jedhama Warra sirna kana keessatti baratee as gahe keessaa, tokko ana; mariilee Biiroon Barnoota Oromiyaa kanaan dura sadarkaa adda addaatti qopheessite keessatti hirmaachuuf hiree argadheetin ture. Moyxannoon garasiin argadherraa rakkoo amma dhalatte tanarratti xiqqo waa jechuun fedha.
i. Barsiisonni afaan Ingilizii barsiisan dandeetti, leenjiifi qophii gahaa dhabuu,
ii. Sirni barnootaa kan duraaniitiifi kan ammaatiis guutummatti beekkoomsa afaanii, jechuuniis: dubbisuu, barreessuu, dubbachuufi hubachuu, kan nama goonfachiisu ta’uu dhabuu. Haalli kuni barnoota afaan Ingiliizii qofarratti osoo hintahin barnoota afaan Oromootiifi afaan Amaaraarrattiis ni mul’ata. Kuniis barnoota seerlugaarratti irkatee yaada ofii bifa gahaadhaan ibsachuurratti fuulleeffate tahuu dhabuurra madde. Kanaafu barataa koolleejji xumure kan afaan ofiitiinillee haasaya sirna qabuufi barruu ulaagaa guuttatte fuula takkarratti dhiheessu hin dandeenyeetu omishamaa jira.
4) Ijoolleen Afaan Oromootin baratte Afaan Amaaraa gonkumaa hin beekan kan jedhu dhugaa ta’uu isaa shakkiin qaba. Dhugaadhaa ijoolleen afaan dhalootaatiin baratte Afaan Amaaraa akka ijoollee Finfinneetifi naanno Amaaraatti beekuu dhabuun nimala. Garuu dandeettin Afaan Amaraa barattoonni Oromiyaa qabdu kan naanno Tigraay, Soomaleetifi Kibbaati gadi wanti godhu waa tokkolleen hinjiru. Inumaatu gadaa abbootii keenyaatin walbira yoo qabne, ijoolleen qubeen baratte loqonni isaan afaan Amaaraa ittiin qaaqan fooyya’aadha. Sababni muummeen ijoolleen Oromoo hiree hojii mootummaa federaalaa keessatti itti argatan darrachuufi haphachuun afaan Amaaraa wallaaluurraa osoo hintahin imaammanno golistummaa sirnichi ilmaan Oromoorratti qaburraa maddite.
Haga haalli kun jijjiiramutti carraan ilmaan Oromoo gara mootummaa federaalaa itti seenaniis dhiphachaatuma itti fufa. Afaan Oromoo afaan federaalaa gochuun dirqama. Haa tahummoo, kana gochuu qoftiin furmaata gayaa hintahu. Namni mootummaa federaalaatiif hojjetu afaan Amaaraatiis beekuu waan qabuuf barnoota afaan Amaaraa cimsuufi jajjabeessuuniis barbachisaadha.
Wayyaaneen Lammata Somalee Weeraruuf Duula Baafte